Zanu PF Dismisses as 'Nonsensical' Calls for SADC Intervention in Zimbabwe
FILE - Zimbabwean President Robert Mugabe (C), surrounded by members of the military, is seen attending 25th anniversary Independence celebrations in Harare, Zimbabwe, April 18, 2005.
Zanu PF activists have dismissed as nonsensical calls for the Southern African Development Community (SADC) to intervene in Zimbabwe to end crippling social and economic problems bedeviling the nation.
The party’s Youth League political commissar in London, Farai Muvuti, and veteran Zanu PF activist, Effort Nkomo, told VOA Studio 7 that Zimbabweans should be in a position to resolve their problems without involving organization like SADC.
Muvuti said, “I think we have to deal with this ‘mis-notion’ that there is a crisis in Zimbabwe. When you talk about Zimbabweans as people are portraying that Zimbabweans are protesting that notion does not exist. Zimbabweans are not protesting. There are pockets in Zimbabwe that are protesting …”
But political commentator Dr. Nkululeko Sibanda of Huddersfield University insisted that SADC should intervene to end the Zimbabwe crisis.